Izinzwa: Yazi wonke amazinga okushisa ekhompyutha yakho | Kusuka kuLinux
Ngine-laptop, akuyona enye yezinkulu kakhulu (isibonisi esingu-14-intshi kuphela) kepha ine-CPU engacabangi (Core2Duo T7400). Inkinga ngama-laptops, noma okungenani enye yezinkinga zabo eziyinhloko ukushisa.
Ngokusobala, iPc noma iDeskithophu inomoya omncane ongcono kunelaptop, ngoba inesikhala esiningi ngaphakathi ukuze umoya ujikeleze, inomoya owengeziwe, njll. Futhi njengoba le ukuphela kwekhompyutha ephathekayo enginayo (futhi akunakwenzeka ukuthi ngithole enye i-haha), ngiyayinakekela ngangokunokwenzeka futhi ngihlala ngikwazi ukushisa kwe-CPU.
Ukuthola ukuthi izinga lokushisa ngalinye le-CPU linamazinga aphi okushisa (kungamakhokho ama-2 ngoba iyiCore2Duo), nazi izinyathelo:
1. Faka iphakheji izinzwa ze-lm
2. Qalisa esigungwini: izinzwa
Lokhu kwanele 😀
Mina, ngafaka iphakethe (izinzwa ze-lm) nase-terminal ngiyagijima izinzwa. Nasi isithombe-skrini:
Njengoba ukwazi ukubona kusikrini-skrini, izinga lokushisa engifuna ukulazi (leyo ye-CPU, umnyombo ngamunye ofanayo) Ikona 51 ° C ngamunye
Ngokuzenzakalelayo izokhombisa amazinga okushisa ngama-degree Celsius, uma ufuna ukuthi ibakhombise ku-Fahrenheit sebenzisa ipharamitha -f. Leyo: izinzwa -f
Hhayi, akukho okunye ongangeza u-🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Izinzwa: Yazi wonke amazinga okushisa ekhompyutha yakho
I-terminal ingakukhombisa ithempelesha ngesikhathi sangempela ngokubeka:
buka -nama-sensor 01
umzuzwana ngamunye ukhombisa ukuthi izinga lokushisa lishintsha kanjani.
manje ngithanda ukusebenzisa lo myalo futhi ngenze iskripthi ngobukhulu ukuze idatha iboniswe ngokusobala hhayi ku-terminal.
Ngiwuthandile umyalo ukubukela, Bengingamazi 😀
Angazi ukuthi kungani kungathathi umyalo wokubuka, ungashintsha i-YAD ibe yiZeniy futhi kufanele isebenze:
T = $ (izinzwa)
i-yad –notification –back = RED - umbhalo "$ T"
Cha angisebenzelanga mina kodwa ngiyabonga noma kunjalo.
Ngiyahlola, izinga lokushisa lokugcina + 6652.0ºC lidonsa ukunaka kwami, lapho izinga lokushisa eliphakeme lingu-100 andC kanti izinga lokushisa elibucayi lingu-110ºC, lokhu kungukufundwa okunginikeza khona:
i-temp1: + 40.0 ° C (crit = + 95.0 ° C)
I-adaptha: I-adaptha ye-PCI
Isikhathi se-Core0: + 34.0 ° C
Isikhathi se-Core1: + 35.0 ° C
i-temp1: + 6652.0 ° C (ephezulu = + 100.0 ° C, crit = + 110.0 ° C)
Ukube i-PCI ibinalo lelo zinga lokushisa ngabe livele laqhuma ebusweni bakho, iqiniso alikaze lenzeke kimi futhi bengingazi ukuthi ngingalixazulula kanjani.
Nah lokhu ukuthi inzwa ye-nVidia yakho ayihlelwanga kahle, noma isilawuli salokhu se-nVidia yakho asilifundi kahle ithempelesha, noma into efana naleyo haha.
okuyichazayo angikaze ngisebenzise i-nvidia XD
Kuhle kakhulu, futhi, ukuze kube lula, ungangeza ngomyalo we-exec bese usebenzisa i-grep ku-conky.
Kufanele uzame !! 🙂
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngisebenzisa lolu hlelo lokusebenza, kukhona ne-Graphic Frontends efana nale:
xfce4-sensors-plugin, ksensors, sensors-applet for gnome, xsensors for other environments, also conky….
Ngokusobala i-linux mint isihlanganisiwe.
Azikho izinzwa ezitholakele!
Qiniseka ukuthi ulayishe wonke amashayeli we-kernel owadingayo.
Zama ukuthola izinzwa ukuthola ukuthi yiziphi lezi.
bese uphendula lokho akubuza kona, ukuze kuqale, vele unikeze yebo embuzweni wokuthi ngabe ufuna ukuyilayisha ekuqaleni
Njengoba basho ku http://kubuntuneado.blogspot.com.es/2008/01/verificar-temperaturas-con-lm-sensors.html :
Qalisa kabusha uhlelo, njengoba kuyizinzwa ezifundwa i-kernel.
I-KZKG ^ Gaara ngine-T7200 (ebi kakhulu kune-T7400 yakho) futhi ngiyayinakekela ngoba ayikho imali yomunye okwamanje
Okungikhathaza kakhulu ukushisa kwediski ngoba imizuzu eyi-10 ngemuva kokuvula ilaptop isivele ingaphezulu kuka-49-50ºC, ethi ayibe phezulu ku-hard disk.
Yingakho kungalimazi ukuthi inzwa yokushisa yama-hard drive nayo ifakiwe
ukufaneleka ukufaka i-hddtemp
hddtemp / dev / sda (noma yini)
Ngisanda kubheka ukushisa kwe-HDD, futhi kungaphezu kwama-40 °. Lokho kushisa okukhulumayo ngicabanga ukuthi kuphakeme kancane, ngaphandle kokuthi wenza okuthile okuthatha umthwalo omningi kwi-laptop, ngicabanga ukuthi kushisa kakhulu kunalokho obekufanele.
Ngiyabonga, lokho kuqinisekisa ukuthi inkinga ingeyami hhayi ukwakhiwa kwencwadi yokubhalela.
Ngizoyivula ukuze ngiyihlanze futhi ngiyibheke yize ngisola ukuthi iminyaka emibili eyadutshulwa njengeseva ye-ftp ithathe kanzima kwi-hard drive
Uma ungakaze uyivule, uzobona ukuthuthuka okuphawuleka lapho uyihlanza. Manje, ama-laptops angumngani obucayi ... qaphela lapho uvula 😉
Angikaze ngikuqonde lokhu. Kwikhompyutha yami ephathekayo izinga lokushisa ngemuva kwesikhathi esifushane lihlala lingaphezu kuka-100 ° C.
i-temp1: + 115.0 ° C (ephezulu = + 100.0 ° C, crit = + 110.0 ° C)
Angazi noma kuzojwayelekile yini, noma kungangisebenzeli kahle.
Ugcine nini ukuvula ilaptop yakho wahlanza i-heatsink yayo?
Ngincoma ukuthi uthole umuntu owaziyo ngama-laptops, awuthathe uwahlanze (ikakhulukazi i-CPU vent).
Lokho kushisa kudlulele, into exakayo ukuthi akuqali kabusha ukuvikela nje ukuthi kungashi.
Yivule ukuze uhlanze futhi ulungise lokho. Uma ungakwazi ukuqhubeka
KZKG ^ Gaara no-Oberost, ngiyabonga ngezeluleko zakho.
Eqinisweni angikaze ngiyihlanze eminyakeni engu-6! Ngizoyihlukanisa ngiyihlanze, uma kungenjalo kulezi zinsuku iyangishisa.
Into yokucisha yenzeke kimi ngokusatshalaliswa okukodwa, kokunye umlandeli uyahlanya.
Wamukelekile mngani, silapha ukuzosiza 🙂
Ngicabanga ukuthi kungenxa kaNoveau, ayisebenzi ukonga amandla ku- [b] [i] some [/ b] [/ i] nVidia.
Hhayi, ngisebenza kahle, ama-cores wami imvamisa (ngokusho kwalokhu) azungeze ama-60 °, abe ngu-80 ° phezulu futhi abe yi-100 ° abaluleke.
Uma kuyikhompuyutha ephathekayo akunankinga nhlobo, okungenani okwami ​​kugcinwa (kuyasebenza futhi kuyacutshungulwa) ngaphezu kwama-80 °.
Manje, uma kuyi-PC (ideskithophu) ... kufanele uhlole kahle, beka okunamathiselwe okushisayo ku-CPU, uhlanze ikhompyutha, njll.
Yebo, iyiDeskithophu, kepha isebenzisa i-CPU eningi (i-GTalk Plugin) ifinyelela kuma-65-70, okuthi uma kubonakala kuyingozi kimi ... Futhi manje ukuphequlula kuphela akudluli kuma-60 ° ...
Yilelo futhi izinga lokushisa i-laptop yami ebelinalo ngaphambi nje kokuba ngilihlanze ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngoba livuliwe belivele lingaphezulu kuka-60 °, ngemuva kokulihlanza izinga lokushisa lehle ngo-15 °.
Futhi ukushisa kwamaGPU (nVidia / Ati / Intel) akubakhombisi?
I-nVidia angicabangi ukuthi iyabakhombisa, ngoba lokho kuzofanele sisebenzise isoftware ye-nVidia yeLinux engicabanga ukuthi.
ukufaneleka ukufaka izilungiselelo ze-nvidia
Uma usuyifakile uyivula kwimenyu noma kukhonsoli futhi kuthebhu yezilungiselelo ezishisayo uthola izinga lokushisa
Ku-gnome 2 uma ufaka izinzwa-i-applet unenketho yokuthi kuhlu lwenzwa uthola eyodwa ye-GPU enesithonjana sayo kanye nezinga layo lokushisa.
Ku-XFCE angikwazanga ukuthola lutho ukuze iphaneli lingikhombise izinga lokushisa le-GPU
Wenza kanjani ukuze ushintshe umbala wohlobo lobuciko ku-Konsole?
Empeleni akuyona into eKonsole, kepha nginezeluleko engizibeke ku-.bashrc yami ... ngizobhala lokhu kungekudala.
Ngine-HP ene-Intel T9400 dual core 2.53 Ghz, 4 ram kanye nevidiyo ye-ATI, ngoba bengilokhu nginezinkinga ngodaba lokushisa kwiLinux, ngoba ngeWindows ayidluli u-32 °, kepha kusukela okokuqala ngizama ukufaka i-Linux kukhuphule izinga lokushisa laya ku-50 ° kusetshenziswa Ubuntu 14.04, ngoba njengoba ngithole isikhathi esiningi kakhulu, ngiqale ukufuna ezinye izinketho, kunjalo ngeXubuntu 14.04 32-bit, Lubuntu 14.04 32-bit, futhi ekugcineni nginguye ngisebenzisa iLinux Mint 17, njengoba izinga lokushisa lihlala phakathi kuka-35 ° no-38 °, ngicabanga ukuthi izinga lokushisa lihle. Noma nginephutha?
Ngiyabonga kakhulu mngani. Ukusebenza kahle ku-Ubuntu 14.04.3LTS amd64.